Anya maka ịgbado ọkụ nke igwe anaghị agba nchara - China Foshan Hamis Steel
Anya maka ịgbado ọkụ nke igwe anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara efere efere mejupụtara abụọ iche iche nke ígwè efere, gụnyere cladding (igwe anaghị agba nchara) na isi oyi akwa (carbon ígwè, ala alloy ígwè). Ebe ọ bụ na e nwere ihe abụọ bụ isi ihe nke pearlite nchara na austenitic ígwè mgbe ịgbado ọkụ igwe anaghị agba nchara, ịgbado ọkụ nke clad nchara efere bụ ịgbado ọkụ nke dissimilar ígwè. Ya mere, kwekọrọ ekwekọ usoro kwesịrị iwere n'oge ịgbado ọkụ usoro bụghị naanị izute ike chọrọ nke ịgbado ọkụ Ọdịdị nke isi oyi akwa, ma hụ corrosion-eguzogide nke mkpuchi. Ọ bụrụ na ime ihe adịghị mma, ọ ga-enwe nsonaazụ na-adịghị mma. Anya dị iche iche n'oge ịgbado ọkụ bụ ndị a:
1, otu ụdị ịgbado ọkụ ahụ enweghị ike iji weld igwe anaghị agba nchara. Maka igwe anaghị agba nchara igwe mejupụtara, ọ dị mkpa iji nweta ike achọrọ nke usoro ịgbado ọkụ nke isi akwa ahụ yana iji hụ na mkpuchi mkpuchi nke mkpuchi. Ya mere, ndị ịgbado ọkụ nke igwe anaghị agba nchara nwere ya akpan akpan. The isi oyi akwa na isi oyi akwa kwesịrị welded na carbon ígwè na ala alloy ígwè electrodes kwekọrọ ekwekọ na isi oyi akwa ihe, dị ka E4303, E4315, E5003, E5015, wdg.; maka cladding oyi akwa, carbon abawanye kwesịrị ẹse. N'ihi na carbon abawanye nke weld ga-ukwuu belata corrosion eguzogide nke igwe anaghị agba nchara mejupụtara ígwè. Ya mere, ịgbado ọkụ nke ịgbachi na nkedo kwesịrị ịhọrọ electrode kwekọrọ na ngwongwo ahụ, dị ka A132 / A137, wdg; ịgbado ọkụ nke mgbanwe oyi akwa na nkwụsị nke isi oyi akwa na cladding kwesịrị belata dilution mmetụta nke carbon ígwè na igwe anaghị agba nchara alloy mejupụtara na ịgbakwunye ịgbado ọkụ usoro Burngba ọkụ ọnwụ nke alloy mejupụtara. Enwere ụdị mkpụrụedemede CR25Ni13 ma ọ bụ Cr23Ni12Mo2 nwere nnukwu chromium na ọdịnaya nickel, dịka A302 / A307.
2. Maka weldments nke igwe anaghị agba nchara, ọnụ na-ezighi ezi ekwesịghị ịgafe uru a ga-ekwe (1mm). Igwe anaghị agba nchara efere bụ ndị mejupụtara a isi oyi akwa na a cladding oyi akwa na a ọkpụrụkpụ nke naanị 1.5 ka 6.0 mm. Tụle na mgbakwunye na-enye afọ ojuju na n'ibu Njirimara nke mmiri, igwe anaghị agba nchara mejupụtara nwekwara mkpa iji hụ na corrosion eguzogide nke mkpuchi na kọntaktị na corrosive ajụ. Ya mere, mgbe ị na-agbakọta mgbatị ahụ, achọrọ ka ọ dozie akwa mkpuchi dị ka ihe ndabere, na nsọtụ nke akwa mkpuchi ekwesịghị ịgafe 1mm. Nke a dị mkpa karịsịa mgbe ị na-ejikọ efere nchara nchara nchara dị iche iche. Ọ bụrụ na nhazi nke edere n'etiti akwa mkpuchi ahụ buru oke ibu, weld na mgbọrọgwụ nke ntọala ahụ nwere ike gbazee ụfọdụ n'ime igwe anaghị agba nchara, nke na-eme ka ihe ndị e ji ígwè mee nke weld dị na mgbọrọgwụ nke isi ahụ, na-eme ka weld ahụ ghọọ nke siri ike ma na-emebi emebi, ma n'otu oge ahụ, igwe anaghị agba nchara na nkwonkwo butt. Ọkpụrụkpụ ga-ebelata ọrụ ndụ, metụta njiri mara mma nke akwa mkpuchi, ọ na-esikwa ike iji hụ na nguzogide corrosion nke usoro welded.
3, ọ bụ ihe amachibidoro ịgbado akwa ntụgharị ma ọ bụ ịgbado ọkụ na-acha nchara nchara na ngwongwo nke ịgbado ọkụ: n'otu oge ahụ, gbochie iji ihe eji eme ihe na-eme ka a ghara iji ya mee ihe na ntanetị nke ịgbado ọkụ isi oyi akwa.
4. Mgbe isi oyi akwa ịgbado ọkụ ihe na-eji na-weld na oyi akwa na cladding n'akụkụ, a nzu ngwọta ga-ntekwasa n'ime 150mm na abụọ nke uzo iji chebe ya iji gbochie isi oyi akwa nugget ihe si arapara na igwe anaghị agba nchara elu n'oge usoro ịgbado ọkụ. Ihe nkiri oxide dị n'elu na-emetụta nkwụsị nke corrosion nke igwe anaghị agba nchara. A ga-eji nlezianya kpochapụ ihe ndị na-agbapụta agbapụ agbasoro.
5. Mgbọrọgwụ weld nke isi oyi akwa adopts electrode aak ịgbado ọkụ. Iji belata dilution nke alloy ọcha n'okpuru ọnọdụ nke n'ịhụ na penetration, na anọkọ ruru kwesịrị belata. N'oge a, a pụrụ iji obere ịgbado ọkụ na ọsọ ọsọ ịgbado ọkụ. Kwee ka akụkụ okirikiri. Weldgbado ọkụ nke nkedo ahụ kwesịrị ịhọrọ obere ntinye ọkụ ọkụ, nke mere na oge obibi na mpaghara dị egwu (450 ~ 850 ℃) dị mkpụmkpụ dị ka o kwere mee. Mgbe ịgbado ọkụ, enwere ike iji mmiri oyi mee ihe ngwa ngwa.
6, ọ bụrụ na achọpụtara igwe anaghị agba nchara nwere ntụpọ delamination tupu ịgbado ọkụ, anaghị anabata ịgbado ọkụ. A ga-ebu ụzọ wepụ mmebi ahụ, ịgbado ọkụ (ntụgharị, ịgbado ọkụ ịgbado ọkụ), na ịgbado ọkụ mgbe emechara.
7. A ghaghị iji ngwá ọrụ pụrụ iche hichaa isi ala na akụkụ abụọ nke cladding. Ntọala ntọala ahụ ga-eji brushes nke nchara carbon nchara, ihe mkpuchi ahụ ga-eji brushes nchara nchara.
Post oge: Jan-06-2021